RASMI: Chelsea Oo Ugu Danbayn Ku Guulaysatay In Ay Heshiis Cusub Oo Waqti Dheer Ah Ka Saxiixato Xidigii Kooxaha Waa Wayni Doonayeen Ee Callum Hudson-Odoi. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
September 19, 2019 at 18:52 RASMI: Chelsea Oo Ugu Danbayn Ku Guulaysatay In Ay Heshiis Cusub Oo Waqti Dheer Ah Ka Saxiixato Xidigii Kooxaha Waa Wayni Doonayeen Ee Callum Hudson-Odoi.2019-09-19T18:52:33+01:00 CAYAARAHA
Kooxda Chelsea ayaa ugu danbayn si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay heshiis cusub oo waqti dheer ah ku abaal marisay da’yarka aadka loo qiimeeyo ee Callum Hudson-Odoi kaas oo kooxo waa wayn oo ay Bayern Munich ugu horayso lala xidhiidhinayay.
Chelsea ayaa meel adag iska taagtay dalabo badan oo ay Bayern Munich ka heshay kaas oo ay ku doonayeen saxiixa Callum Hudson-Odoi laakiin da’yarka reer England ayaa qalinka ku duugay heshiis cusub oo Stamford Bridge waqti dheer ku sii hayn doona.
Hudson-Odoi ayaa saxixiay qandaraas uu isbuucii ku qaadanayo 100 kun ginni iyadoo Bayern Munich oo rajo weyn ka qabtay saxiixa xiddigaan ay haatan quusatay.
Hudson-Odoi oo dareenkiisa ka hadlaya ayaa yidhi: “Waa dareen aad u fiican. Muddo dheer ayaa la sugayay laakiin haatan waa la dhameeyay, aad ayaana ugu faraxsanahay. Waxaan ciyaaryahan Chelsea ahaa tan iyo sideed sanno jirkeydii, kooxdaan ayaana ii ah tan igu haboon.
“Waxaan doonayaa inaan koobab badan qaado intii macquul ah, inaan dheelo kulamo badan oo aan dhaliyo goolal badan. Koox ahaan waxaan dooneynaa inaan gaarno natiijooyin fiican. Waan ku faraxsanahay in wax walba la isku raacay, waxaana haatan indhaha ku hayaa inuu garoomada ku soo laabto.”
Heshiiska ayaa la rumeysan yahay inuu ka buuxo sharuudo badan iyadoo xiddigaan uu heli doono 50 milyan ginni marka uu qandaraaskiisa dhamaanayo shan sannadood ka dib.
« RASMI: Callum Hudson-Odoi oo heshiis cusub qalinka ugu duugay kooxdiisa Chelsea
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Manchester United iyo FC Astana ee tartanka Europa League »